Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ကြရန် UNFC နှင့် NCUB သဘောထားထုတ်ပြန်
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ကြရန် UNFC နှင့် NCUB သဘောထားထုတ်ပြန်
နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ကြရန် ရည်ရွယ်၍ ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ-UNFC နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုး သားကောင်စီ-NCUBတို့က ယနေ့ ပူးတွဲသဘောထား ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားအတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေ ချိန်၌ ကချင်ပြည်နယ်အပြင် သျှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ထိရောက် အောင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရမည်ကို မီးမောင်းထွန်းပြလိုသောကြောင့် ယခုလို သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း UNFC တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ခွန်ဥက္ကာက ပြောသည်။
ခွန်ဥက္ကာက “အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေ ခိုင်မာအောင် လုပ်မယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်းက ထောက်ခံမှုကိုလည်း လိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေ ကျနော်တို့အပေါ် ထောက်ခံရင် အစိုးရက အခွင့်ကောင်းယူပြီး လှည့် စား၊ အသုံးချလို့ မရအောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် UNFC နှင့် NCUB တို့၏ ပူးတွဲကြေညာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ အနာဂတ် ဘ၀တစ်လျှောက် အေးချမ်းသာယာစွာ ရာသက်ပန် နေထိုင်နိုင်ရန်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော ဂုဏ် သိက္ခာရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်နှင့် ၂၀၁၂ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ရလာဒ်များကို ရရှိရန် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆန္ဒပြုသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် သမ္မတနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့သည် နိုင်ငံတော်၏ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုတွင် အဓိ က တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည့်အလျောက် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများနှင့် အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခများကို ချွင်း ချက်မရှိ ရပ်စဲပေးရန်လည်း ထိုကြေညာချက်တွင် တောင်းဆိုထားသည်။
ဆက်လက်၍ ခွန်ဥက္ကာက “ကျနော်တို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အင်အားစုတွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ စစ်မှန်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးရရှိဖို့၊ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကို မဖြစ်မနေ ၀ိုင်းပြင်မယ်။ ဒါတွေပြီးမှ ပဋိပက္ခတွေကြားထဲမှာ အဖက်ဖက်ကနေ ပျက်စီးနေတဲ့ တိုင်း ပြည်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက် ၃ခုနဲ့ ရှေ့ဆက် သွားကြပါမယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်မှ ၂၇ရက်နေ့အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် UNFC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အပါအ၀င် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်တွင်းမှ ခေါင်းဆောင်အ ချို့တို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပူးပေါင်းသွားရန် သဘောတူခဲ့မှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု သိရ သည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၈ရက်နေ့ကလည်း မြန်မာပြည်တွင်းအခြေစိုက် ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ် (UNA)က တိုင်းပြည်၏ စစ်မှန်သည့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၊ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အား စုများအားလုံး အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ကြရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
UNFC ကို ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO)၊ သျှမ်းပြည်တပ်မ တော်မြောက်ပိုင်း(SSA-N)၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါ တီ(NMSP)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA)၊ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP)၊ ၀’အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (WNO)နှင့် လားဟူဒီမိုကရက် တစ်သမဂ္ဂ (LDU) အဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။
အလားတူ NUCB ကို ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် မာနယ်ပလော၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန် မြန်မာဒီမို ကရေစီအင်အားစုအပြင် ကရင်၊ ချင်း၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ လားဟူနှင့် ‘၀’ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။
ပအိုဝ်းများ သထုံမြို့ရွှေစာရံစေတီမှာ ဆွမ်းဆန်စိမ်းန...
KBZ Group မှ လေယာဉ်သစ်များ ၊ ဘဏ်ခွဲများ တိုးချဲဖွင...
ဇင်းမယ်မြို့မြန်မာနှင့် ပအိုဝ်းဘုန်းကြီးကျောင်း စု...
ပအိုဝ်းအမျိုးသား ဂန္ဓ၀င် ဂီတအနုပညာရှင် "ခွန်သာဒွန်း...
The Rangoon University I Know / ကျွန်တော်သိခဲ့သော ...
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ကို ကယ်တင်ပေးကြပါ
လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အာဆီယံအကြို ရွေ့ပြောင...
တောင်ကြီးမြို့ ပအိုဝ်းကျောင်းသားလူငယ်များ မဟာဘုံကထ...
ပအိုဝ်းရိုးရာ အစားအစာဖြင့် တောင်ကြီးမြို့တွင် လူငယ...
The raison D'être of Obama Going to Burma
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဥက္ကဌဖလား ဘောလုံးပွ...
တောင်ကြီးမြို့ အေးစေတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဘုံကထိန်သက...
မြန်မာစစ်တပ် ၁၃၀တပ်ရင်းမှ ခွင့်ပြန် TNLAရဲဘော်ကို ...
Strong quake strucked central Myanmar
လွယ်တိုင်းလျံတွင် ပြုလုပ်မည့် ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ ကေ...
ရှမ်းညီလာခံတွင် ဒု-သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကို ဖိတ...
Are radical Islamic ideas being encouraged in Myan...
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ပဲခူးတိုင်း ထန်းတပင...
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မဲန်နီဆိုးတာပြည်နယ်ရှိ စိန့်ေ...
Burma: An Appeal to the Ethnic Leaders
ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံရောက် ပအိုဝ်းလ...
လူထုအကျိုးပြု ဆွေးနွေးလှုပ်ရှားမှုများ ခွန်တန်နွယ်...
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်း...
Burma: Myanmarnization by Brute Force will Not Pay